टेस्लाको कीर्तिमान एक वर्षमा यति धेरै कार उत्पादन - खबरदार न्युज
टेस्लाको कीर्तिमान एक वर्षमा यति धेरै कार उत्पादन
January 9, 2021 January 9, 2021 AdministerLeaveaComment on टेस्लाको कीर्तिमान एक वर्षमा यति धेरै कार उत्पादन
अमेरिकी विद्युतीय कार निर्माता टेस्ला अहिले विश्वकै सबैभन्दा मूल्यवान् कार निर्माता कम्पनी हो । शुक्रबारसम्म यो कम्पनीको बजार पुँजीकरण सात खर्ब ७४ अर्ब डलर पुगेको छ । बजार पुँजीकरणको हिसाबमा हेर्ने हो भने टेस्ला सामाजिक सञ्जाल कम्पनी फेसबुकभन्दा पनि अगाडि देखिएको छ । यो विद्युतीय कार निर्माता विश्व बजारमा आएको लामो समय भने भएको छैन । उसले छोटो समयमा नै दशकौंदेखि बजारमा कारोबार गर्दै आएका कम्पनीहरुलाई बजार पुँजीकरणको हिसाबमा पछि पारेको हो । सन् २०१९ को अन्तिममा टेस्लाको बजार पुँजीकरण ६० अर्ब डलर थियो । तर एक वर्षमा कम्पनीको बजार पुँजीकरण आकाशिँदै झण्डै १३ गुणा पुगिसकेको छ । टेस्ला कम्पनीको मात्र होइन । टेस्लाका सीईओ एलन मस्कको सम्पत्ति पनि पछिल्लो एक वर्षमा उल्लेख्य बढेको छ । हालै मात्र उनी विश्वको सबैभन्दा धनी व्यक्ति बनेका छन् । उनको सम्पत्ति बढ्नुमा पनि टेस्लाको सेयरको भाउ आकाशिनु मुख्य कारण थियो । मस्कको सम्पत्ति एक खर्ब ८८ अर्ब नाघिसकेको छ । उनीसँग टेस्लाको २० प्रतिशत सेयर छ । एक वर्षमा टेस्लाको बजार पुँजीकरण कसरी आकाशियो त ? कम्पनीको सेयरको भाउ आकाशिनुको एउटा कारण लगानीकर्ताहरुले विद्युतीय सवारीसाधनको राम्रो भविष्य देख्नु हो । जलवायु परिवर्तन तथा प्रदूषण नियन्त्रणका लागि अहिले विश्वभर नवीकरणीय ऊर्जाबाट चल्ने सवारीसाधनको प्रयोग बढाउने नीति विश्वभरका मुलुकहरुले लिएका छन् । यस्तो अवस्थामा स्वाभाविकरुपमा लगानीकर्ता को आँखा टेस्लामा पर्‍यो जसको कारण निरन्तर कम्पनीको शेयर भाउ उकालो लाग्यो । टेस्लाको सेयर भाउ उकालो लाग्नुको अर्को कारण हो – कम्पनीका उत्पादनमा प्रयोग हुने नयाँ फिचर्स तथा डिजाइन हुन् । टेस्लाले आफ्ना कारहरु प्रविधिमैत्री बनाउनुका साथै प्रयोगकर्तामैत्री पनि बनाउँदै ल्याएको छ । जसको कारण धेरैको आकर्षण पनि अहिले टेस्लाको कारमा देखिएको छ । जसले टेस्लाको सेयर भाउ बढाउन सहयोग पुग्यो ।
टेस्लाको उदयमा सबैभन्दा ठूलो योगदान कम्पनीका सीईओ एलन मस्कको नयाँ आविष्कारको सोचकै छ । उनले ल्याएका योजनाहरु पछिल्लो समय बजारमा प्रभावकारी पनि देखिएका छन् । जसको प्रतिफल शेयरको भाउमा देखिएको छ । विद्युतीय कार निर्माताको सेयर भाउ बढ्नुको अर्को महत्वपूर्ण कारण सवारीमा प्रयोग गरिने ब्याट्रिको भाउ घट्नु पनि हो । ब्याट्रिको भाउ सस्तो हुँदै गएसँगै टेस्लाका सवारीसाधनहरु पनि सस्तो हुँदै गए । त्यसैले मानिसहरुको चासो विद्युतीय सवारीसाधनमा पर्‍यो । टेस्लाले ल्याएका मोडल एस, मोडल वाई, मोडल एक्स र मोडल ३ जस्ता कारहरु धेरैको रोजाइमा पर्‍यो । जसको कारण बजारमा स्थापित भइसकेका ब्राण्डहरुलाई पनि टेस्लाले पछि पार्न सहयोग गर्‍यो । टेस्लाले परम्परागत महँगो मूल्यको कारबाट यात्रुमैत्री बनाउन आफ्नो मोडल ३ कार ल्याएको थियो । यो कारको मूल्य अन्य मोडलका कारको तुलनामा झण्डै आधा तोकिएको थियो । यसको उल्लेख्य माग आयो । त्यसपछि कम्पनीले उत्पादनको लागि पनि महत्वाकांक्षी योजना राख्यो । तर सुरुआती दिनमा लक्ष्यअनुसारको उत्पादन हुन सकेन । सोही क्रममा कम्पनी समस्यामा परेको थियो । समस्याकै बीचमा कम्पनीका सीईओ मस्कले एप्पलालाई आफ्नो कम्पनी करिब ६० अर्ब डलरमा बिक्रीको प्रस्ताव गरेको हालै मात्र मस्कले बताएका छन् । यद्यपि एप्पलले टेस्लामा इच्छा देखाएन । टेस्लाले पनि बिस्तारै आफ्नो लक्ष्य अनुसारको उत्पादन थाल्यो र परिणामस्वरुप कम्पनीको सेयर पनि उकालो लाग्दै गयो । पछिल्लो पाँच वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने टेस्लाको भाउ गत वर्षसम्म एकैनासले वृद्धि हुँदै आएको देखिन्छ । तर महत्वाकांक्षी मानिएको मोडल ३ को समस्या पार लगाउनु कम्पनीको लागि ‘टर्निङ प्वइन्ट’ बन्न पुग्यो । यससँगै टेस्लाले आफ्नो उत्पादन अमेरिकाभन्दा बाहिर पनि सुरु गर्‍यो । यसै क्रममा कम्पनीले चीनमा पनि आफ्नो फ्याक्ट्रि सञ्चालनमा ल्याएको थियो । सन् २०२० को सुरुआतमा नै टेस्लाले कम्पनीको लागि सन् २०१९ ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ बनेको घोषणा गरेको थियो ।
विद्युतीय कार निर्माता अमेरिकी कम्पनी टेस्लाले कार उत्पादनको आफ्नो इतिहासमा नयाँ कीर्तिमान कायम गरेको छ ।
टेस्लाले सन् २०२० मा ५ लाख विद्युतीय कार निर्माण गरेको छ, जुन कुनै पनि वर्षमा कम्पनीले उत्पादन गरेको सबैभन्दा ठूलो संख्या हो । उत्पादित कारमध्ये ४ लाख ९९ हजार ५५० वटा कार ग्राहकलाई डेलिभर गरिसकिएको छ भने अन्य कार ग्राहकसम्म पुग्ने क्रममा रहेका छन् । कारको उत्पादन तथा डेलिभरीको यो संख्या सन् २०१९ को तुलनामा एक तिहाइले बढी हो । कोरोना महामारीका कारण कम्पनीको क्यालिफोर्नियास्थित मुख्य उत्पादन कारखाना दुई महिनाका लागि बन्द हुँदासमेत टेस्लाले ५ लाख कार उत्पादन गर्न सक्नुलाई ठूलो उपलब्धि मानिएको छ । चीनको सांघाईमा सन् २०१९ को अन्त्यतिरबाट सञ्चालनमा आएको नयाँ कारखाना टेस्लाको भाग्य चम्काउनमा महत्वपूर्ण सावित भएको छ । सन् २०२० मा उत्पादित तथा ग्राहकसम्म पुर्‍याइएका टेस्लाका कारमध्ये ठूलो हिस्सा सांघाइमा उत्पादित कार नै रहेका छन् । समग्रमा सन् २०२० को चौथो त्रैमासिकमा टेस्ला कम्पनीले १ लाख ७९ हजार ७५७ गोटा कार उत्पादन गरेको छ, जुन अघिल्लो वर्षको सोही त्रैमासिकको तुलनामा ७१ प्रतिशतले बढी हो । यस त्रैमासिकमा कम्पनीले त्यसअघि उत्पादित समेत गरी १ लाख ८० हजार ५७० कार डेलिभर गरेको छ, जुन सन् २०१९ को सोही त्रैमासिकको तुलनामा ६१ प्रतिशतले धेरै हो । स्मरण रहोस् गत अक्टोबर महिनामै टेस्लाका सीईओ एलन मस्कले सन् २०२० मा कम्पनीले ५ लाख कार उत्पादन गर्ने घोषणा गरेका थिए । तर वालस्ट्रिटका विश्लेषकहरुले चाहिँ कम्पनीको उक्त लक्ष्य पूरा हुन कठिन रहेको भन्दै त्यसभन्दा कम्तिमा ९ हजार कार कम उत्पादन हुनसक्ने बताएका थिए । महामारीमा उपभोक्ताहरुको आर्थिक जटिलताका बाबजुत पाँच लाखको कोशेढुंगा छुनु भनेको कम्पनीका लागि ठूलो विजय भएको विश्लेषकको भनाइ छ । यसैबीच २०२० मा आफ्नो लक्ष्य पूरा गरेसँगै टेस्लाले सन् २०२१ का लागि थप महत्वाकांक्षी योजना तय गरेको छ । जर्मनीको बर्लिन र अमेरिकाको टेक्सासस्थित अस्टिनमा टेस्लाका नयाँ कारखाना यो वर्ष सञ्चालनमा आउनेछन् भने भारतमा समेत टेस्लाका कारण बिक्री सुरु गर्ने कम्पनीको योजना छ ।
यद्यपि कार उत्पादन तथा बिक्रीमा टेस्लाले प्राप्त गरेको सफलताको तुलनामा कम्पनीको शेयर मूल्यमा भएको वृद्धि निकै नै उच्च रह्यो सन् २०२० मा । यस वर्ष टेस्लाको शेयर मूल्यमा ७४३ प्रतिशतको वृद्धि भयो । सन् २०२१ मा टेस्लाको शेयर मूल्यमा निरन्तर वृद्धि भैरहने अपेक्षा गरिएको छ । स्मरण रहोस् विश्वका अग्रणी गाडी निर्माता कम्पनीहरुले सन् २०२० मा उत्पादन तथा बिक्री गरेका सवारी साधनहरुको रिपोर्ट जनवरी महिनाको अन्त्यसम्ममा सार्वजनिक गर्नेछन् । महामारीका कारण सबैजसो ठूला गाडी कम्पनीहरुको बिक्रिदरमा सन् २०२० मा गिरावट आएको अनुमान गरिएको छ । सन् २०१९ को तथ्यांकलाई हेर्ने हो भने विश्वको सबैभन्दा ठूलो गाडी निर्माता कम्पनी फक्सवागनले सन् २०१९ मा १ करोड १० लाख गोडा कार बिक्री गरेको थियो भने सबैभन्दा ठूलो अमेरिकी गाडी निर्माता कम्पनी जनलर मोटर्सले ७७ लाख गोटा कार बिक्री गरेको थियो । कार बिक्रीको संख्याका हिसाबले टेस्ला ती कम्पनीहरु भन्दा निकै पछाडि रहेको भए पनि ऊ विश्वको सबैभन्दा मूल्यवान कार कम्पनी हो । अहिले करिब ६ खर्ब ७० अर्ब डलर छ । जुन टोयोटा, फक्सवागन, डाइम्लर, जिएम, बिएमडब्लु, होन्डा, हुण्डाई र फोर्ड कम्पनीको संयुक्त मूल्यभन्दा पनि धेरै हो ।
खोसियो प्रेम आलेको बनमन्त्री पद ! आले अब कुन प्यानलमा, केपि ओली कि माधब नेपाल?
June 5, 2021 Administer